मेडिकलको मनलाग्दी - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 Main News National social Socity Special News स्थानीय मेडिकलको मनलाग्दी
Marganugamidaily प्रकाशित समय 1:22:00 AM
सिरहा । घटना एक ः सीमावर्ती भगवानपुर गाउँपालिका–२ लरहाकी २० वर्षीया मनीषा कुमारी यादव ७ महिनाकी गर्भवती थिइन् । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई परिवारले लहानस्थित सरकारी हस्पिटल रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका (राउ) स्मारकमा लगे ।
ओपीडीमा पुर्जा लिई जाँच गराउँदा उनलाई अस्पतालकी डा. सुशीला सिंहले भिडियो एक्सरे गराउनुपर्ने जवाफ दिइन् । सरकारी अस्पतालमा यो सुविधा नरहेको भन्दै डा. सिंहले आफ्नै श्रेया पोलिक्लिनिकमा लगिन् । अस्पताल समयभित्रै पोलक्लिनिक मा बिरामीलाई लगेकी डा. सिंहले उनलाई भिडियो एक्सरे गरिन् । क्लिनिकमा बसेर सरकारी पुर्जामा औषधि लेखिदिइन् । सरकारी अस्पतालमा सुपथ औषधि पसल हुँदाहुँदै क्लिनिकमा किन्न लगाइन् ।
बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको भन्दै घर पठाइन् । तर, २४ घण्टा नबित्दै मनीषालाई फेरि पीडाले च्याप्यो । उनी फेरि सरकारी राउ स्मारक अस्पताल पुगिन् । त्यहाँ उनलाई नर्सहरूले जाँच गर्दा गर्भमा रहेका बच्चाको साउन्ड आएन । केही सयमभित्रै मृत बच्चा जन्मियो ।
घटना दुई ः पुस ५ गते सुत्केरी व्यथाले च्याप्दा गोलबजार–६ माइतमै बसिरहेकी २१ वर्षीया सन्जु पासवानलाई आमा शिला पासवानले उपचारका लागि स्थानीय सरकारी अस्पतालमा लगिन् । त्यहाँबाट उनलाई अस्पतालले १० मिनटमै रेफर गरी लहानको सरकारी राउ स्मारक अस्पताल पठायो । चार घण्टासम्म उपचाररत रहेकी सन्जुको बल्ड प्रेसरमा घटबढ हुन थाल्दा यहाँबाट पनि धरान रेफर गरियो ।
केही छिनमै एक एम्बुलेन्स ड्राइभरले उनलाई यही बिरामी निको हुन्छ भनेर फकाउँदै ओम गुरुकुल हेल्थ केयर प्रालिमा र्पुयाए । हेल्थ केयरका डाक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भने । अपरेसन गरी बच्चा निकालियो । फेरि हेल्थ केयरले उनका आमालाई बिरामीलाई रगत चाहियो, छिटो ल्याउनू भन्दै बाहिर पठायो । त्यही मौका छोपी हेल्थ केयरले बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखी विराटनगर लग्यो । एम्बुलेन्सबाट निकालेर स्ट्रेचरमा राख्दा त्यहाँको अस्पतालले सन्जुको पहिले नै मृत्यु भइसकेको जवाफ दियो । सन्जुले जन्म दिएकी शिशु भने सकुशल छिन् । गुरुकुल हेल्थ केयरको लापरबाहीले छोरीको मृत्यु भएको आमा शिला पासवान को आरोप छ । घटना तीन ः असार ३१ मा सिरहा–७ की मनतोरिया मण्डल लाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । र परिवारले उनलाई जिल्ला अस्पताल सिरहा लग्यो । चिकित्सकले शल्य क्रिया सुविधा भएको अस्पताल लैजान सुझाए । मण्डल परिवारले मनतोरियालाई लहानस्थित सप्तऋषि अस्पताल भर्ना गरे ।
चिकित्सकले असार ३२ मा मनतोरियाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जानकारी गराए । शल्यक्रिया गरेर सकुशल बच्चा पनि जन्मियो । बच्चा जन्मेको सात दिनपछि
(साउन ७ गते) मनतोरियालाई औषधि दिएर अस्पालले डिस्चार्ज गरेर घर फर्कायो । घर फर्केको दुईचार दिनमै मनतोरियालाई पेट पोल्ने, ढाडिने समस्या भएपछि आफन्तले उनलाई लिएर सप्त ऋषि अस्पतालमै ल्याए । चिकित्सक ले औषधि थपेर ‘निको हुन्छ भन्दै घर फर्काए । उनको समस्या झन्झन् बल्झिँदै गयो । पेट पोल्ने, ढाडिने समस्या बढेर दिसापिसाबसमेत बन्द भएपछि मण्डल परिवार अत्तालियो । साउन १९ गते बिरामीलाई सप्तऋषि अस्पताल र्पुयाइयो । चिकित्सकले जाँच गर्दा पेटभित्रै समस्या हुन सक्ने भन्दै विराटनगर को सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजानुपर्ने बताए । विराटनगरको नोबेल अस्पताल र्पुयाउँदा मनतोरियालाई समस्या पत्ता लाग्यो ।
सप्तऋषिका चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा चार सय ग्राम गज (कपडा) उनको पेटभित्रै छाडेर टाँका लगाइदिएको पाइयो । धन्न, समयमै थाहा पाएकाले उनको ज्यान जोगियो । यी त हुन् केही प्रतिनिधि घटना मात्र । तीन वटै घटनामा पोलिक्लिनिक तथा चिकित्सकको चरम लापरबाही देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, घटना भइसकेपछि सर्वसाधारण भड्किने डरले पोलिक्लिनिक र अस्पतालले पीडित परिवारलाई आर्थिक लेनदेनमा घटना मिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । क्लिनिकबाट ज्यान लिनेसम्मका लापरबाही भए पनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकले भने बिरामीहरुको उपचारमा लापरबाही नगरेको दाबी गर्छन् । ‘उपचारमा हाम्रो लापरबाही छैन । शल्यक्रिया गर्दा जानाजान कुनै गल्ती गर्दैनौं , सप्तऋषि अस्पतालका संस्थापक डा. पशुपति चौधरीले भने । राउ स्मारक अस्पतालका प्रमुख डा. सुनिल कुशवाहाले पनि मनीषाको घटनामा आफूहरूको लापरबाही नभएको दाबी गरे ।
सुत्केरीको ज्यान गएदेखि गुरुकुल हेल्थ केयर बन्द छ । सञ्चालक प्रहरीको पनि सम्पर्क मा नआएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डीएसपी राजेश थापाले बताए । आफ्नो गल्ती लुकाउन पोलिक्लिनिक हरूले घटनालगत्तै पीडितलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि पीडितले क्लिनिकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी नगर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
उजुरी नआउँदा कारबाही गर्न नसकिएको प्रहरी प्रशासनको भनाइ छ । सन्जु र मनतोरियाको घटनामा पीडित परिवारलाई पोलिक्लिनिकहरूले आर्थिक लेनदेनमा घटना मिलाएको बताइन्छ । तर पछिल्लो मनीषाको घटनामा भने प्रहरीले जाहेरी लिनै नमानेको पीडित परिवारले बताएको छ । मनीषाका पति वीरेन्द्र यादवले श्रेया पोलि क्लिनिक माथि कारबाही माग्दै जाहेरी दिए । तर प्रहरीले त्यसको सुनुवाइ नगरेको यादवको भनाइ छ ।
पीडित पक्षमा प्रहरी प्रशासन नभइदिँदा न्याय पाउन कठिन भएको मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत बताउँछन् । ‘पीडितलाई आर्थिक लेनदेनमा घटना मिलाउने प्रवृति बढेको छ, उनले भने, ‘यस्तो मानसिकताले समाजमा अपराधले प्रोत्साहन पाउँछ ।
पीडितको जाहेरी दर्ता नगरेका प्रहरीले राउ स्मारक अस्पताका कर्मचारीले दिएको निवेदन भने दर्ता गरे । बिरामीका आफन्तले चिकित्सकको क्वार्टरमा हुलदंगा गरेको अस्पतालका कर्मचारीको आरोप छ । ‘अस्पतालका कर्मचारी ले निवेदन दर्ता गराएका छन्, बिरामी पक्षको जाहेरी पनि हुलाक बाट पठाएको सुनिएको छ, इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डीएसपी राजेश थापाले भने, ‘दुवै पक्षबीच सहमति भएको मलाई थाहा छैन । तर प्रहरीको उपस्थितिमा पीडित पक्षबीच सहमति भएको छ । अस्पतालका कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नभनेको उनले बताए ।
नियमनकारी निकाय मौन बस्दा निजी स्वास्थ्य संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् । अनुमति नलिएका सेवा पनि निर्बाध सञ्चालनमा छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका अनुसार स्वतः खारेजी भइसकेका लहानका ओम गुरुकुल हेल्थ केयर प्रालि, आदित्य मेडिकल, लीलामदन, त्रिदेव, मिर्चैयाका शुभशान्ति, गोलबजारका रामहेल्थ र धनगढीमाई नगरपालिका का मदरल्यान्ड गरी सात पोलि क्लिनिक बन्द भएका छैनन् ।
गोलबजारका सगरमाथा मोडल, माँधमिनी, भुमिजा मोडल, मिर्चैयाका रेखा नर्सिङ होम, लहान नगरपालिकाका लहान लाइफ केयर, डिभाइन हेल्थ केयर, फ्रेन्ड्स मोडल र कामना नर्सिङ होम गरी आठ वटा १५ बेडका निजी अस्पताल भएका छैनन् । ‘यी अस्पताल र पोलिक्लिनिकलाई गएको भदौ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थितिमा भएको बैठकले दुई महिनाका लागि नवीकरण गराउन म्याद थपेको थियो, जनस्वास्थ्य कार्यालयका शाखा अधिकृत उमेशलाल कर्ण भने, ‘त्यो समयमा पनि कोही आएन । कारबाही गर्ने काम प्रशासनको हो, खै किन कुनै कारवाही भएको छैन ।